रुघा लागेर बन्द भएको छ ? यसरी सजिलै खुलाउनुस नाक::Nepal's Online News Portal
रुघा लागेर बन्द भएको छ ? यसरी सजिलै खुलाउनुस नाक
मङ्ल, बैशाख १०, २०७६
काठमाडौँ । तपाई रुघा लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? रुघा लागेर नाकै बन्द भई मुखबाट सास लिनुपर्ने स्थिति आइदिन सक्छ । अझ रातमा रुघा लाग्यो भने त मीठा सपना आउनुको साटो दुःस्वप्न आइदिन्छ । सजिलो गरी सास फेर्नका लागि तपाईं यता र उता कोल्टे फेरिरहनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ दिइएका दुईवटा टिप्स फलो गर्नुभयो भने बन्द नाक खुल्छ ।
१ जिभ्रो र अक्युप्रेसर च्यापुमा लगेर जिभ्रोको टुप्पो केही सेकेन्डका लागि थिचिरहनुस् । त्यसपछि बिस्तारै जिभ्रोलाई सहज बनाउनुस् । फेरि फेरि त्यही अभ्यास गरिरहनुस् ।
२ सास रोक्नुस् गहिरो सास लिनुस् । त्यसपछि टाउको पछिल्तिर झुकाउनुस् र चोरी औंला र बुढी औंलाले थिच्नुस् । सम्भव भएसम्म यसरी नाक थुनेर उभिनुस् । साह्रै गाह्रो भएपछि मात्र औंला हटाउनुस् ।
३ घण्टा सम्म यौन आनन्द दिन्छ प्याजले / कसरी प्रयोग गर्ने ? हेर्नुहोस यहाँ
प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक...
तुलसीले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु के -के हुन् |
हिन्दूधर्मावलम्बीले बिष्णु भगवान रूपमा पुज्ने तुलसी (बेसिल)को वैज्ञानिक नाम ओसिमम स्नाक्टम हो । होलिबेसिलको नामले प्रचलित तुलसी दक्षिणपूर्वी एसियामा पाइने ३० देखि ६० सिएमसम्म लम्बाइको बहुउपयोगी वनस्पति हो । साना–साना हाँगामा झाँगिने तुलसीलाई...
वीर अस्पतालको ताला प्रहरीले खुलायो,
काठमाडौं । आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरहरुले वीर अस्पतालको ओपीडी कक्षमा लगाएको ताला प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको छ । प्रहरीले ताला खुलाए पनि डाक्टरहरुले कार्यकक्षमा बिरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण भने गरेका छैनन् । वीर अस्पतालका निर्देशक...
पुरुषको तुलनामा साच्चै नै महिलामा यौन चाहना कम हुने हो त ? आखिर किन हुन्छ त यस्तो . ….
अक्सर के देखिन्छ भने, यौनका लागि पुरुष नै सधै तत्पर हुनुपर्ने । अर्थात पुरुषको इच्छा अनुसार नै महिलाहरु यौनका लागि तयार हुन्छन् ।यौनमा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच हुने यौन सम्बन्धमा श्रीमानको इच्छा सर्वोपरी...
सपना देख्दा दिमागमा के हुन्छ त ? थाहा पाईराख्नुहोस निन्द्राले दिमाग र शरीरलाई गर्ने यस्ता फाइदा !!!
निन्द्राले गर्ने काम धेरै पहिलेदेखि नै वैज्ञानिकहरूका लागि रहस्यको विषय रहँदै आएको थियो । तर कैयौँ आधुनिक अनुसन्धानहरूले निन्द्राले दिमाग र शरीरलाई गर्ने फाइदाबारे नयाँ नयाँ जानकारी बाहिर ल्याएका छन् । यी अनुसन्धानहरूले...
हास्दा मात्र होइन अब रुदा पनि यस्ता अपत्यारलाग्दा प्रचुर फाइदा ,निर्धक्क भएर रुनुहोस् !
आँखाबाट आँशु बगाउनुलाई हामी कमजोरी वा नामर्दपन ठान्छौं । जबकि रुनु भनेको शरीरको एक स्वाभाविक र प्राकृतिक क्रिया हो । तर, यो शारीरिक क्रिया भए पनि भावनासँग जोडिएको विषय पनि हो । जब हामी दुःख-बोध...